Ukulawulwa kwenkunkuma ngokungalunganga kwe-COVID kunokunyusa ukusasazeka kwentsholongwane
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » Ukulawulwa kwenkunkuma ngokungalunganga kwe-COVID kunokunyusa ukusasazeka kwentsholongwane
Iindaba zeMpilo • iindaba • Safety • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ulawulo lwenkunkuma ye-COVID
Kwiziko leSizwe loLwazi lwe-Biotechnology (NCBI) olwenziwe e-US kwiimpembelelo zesibetho se-COVID-19 kulawulo lwenkunkuma.
Ubhubhane we-COVID-19 uxelwe ukuba unciphise ukungcoliseka komoya kunye nengxolo enxulumene nokusingqongileyo kunye nokuphuculwa kwendalo eyahlukeneyo kunye neendawo zabakhenkethi.
Kodwa ifuthe lokuhlala ekhaya kunye neendlela zothintelo kulawulo lwenkunkuma ziyothusa.
Ukusilela ukulawula ngokufanelekileyo inkunkuma eveliswe kumaziko ezempilo nakumakhaya kungonyusa ukusasazeka kwe-COVID-19.
Ngenxa yokugcina iiglavu, iigawuni, iimaski, kunye nezinye iimpahla zokukhusela kunye nezixhobo, kubonakala ngathi kukho imeko kaxakeka yenkunkuma ngenxa yemveliso engaqhelekanga yenkunkuma evela kumakhaya nakwezempilo. Ukusilela ukulawula ngokufanelekileyo inkunkuma eveliswe kumaziko ezempilo nakumakhaya kunganyuka ukusasazeka kwe-COVID-19 ngogqithiso lwesibini.
Ukulahla inkunkuma ngamandla, ukutshisa evulekileyo, kunye nokutshisa kunokuchaphazela umgangatho womoya kunye neziphumo zempilo ngenxa yokuvezwa kwityhefu. Yiyo ke loo nto kukho umceli mngeni wokulawula inkunkuma engaqhelekanga ngokuzinzileyo kusetyenziswa izibonelelo zenkunkuma ngelixa kuncitshiswa ungcoliseko lomoya, kuthintela ukosuleleka kwintsholongwane yesibini, kunye nokunciphisa umngcipheko kwimpilo.
Inkunkuma yeHazmat yahlulwe yaziingxowa ezibomvu zokuchongwa ngokulula kunye nokulahlwa ngononophelo ePattaya.
Pattaya ukuntywila kwimfumba yenkunkuma enobungozi ye-COVID-19
Ngabahlali basePattaya abaphantse babe ngama-20,000 XNUMX nokuba basesibhedlele okanye kwindawo yokuhlala bodwa, ingxaki yenkunkuma eyingozi yesixeko ikhula ngokukhawuleza kunamatyala e-coronavirus.
Usekela-sodolophu uManote Nongyai uthe ngaphezulu kweetoni ezisixhenxe ngemaski, izixhobo zokuzikhusela, izicwili kunye nenkunkuma eqhelekileyo esetyenziswa zizigulana ngoku ziyafumba. Oko kuthelekiswa neekhilogram ezingama-7 kuphela zenkunkuma ngaphambi kokuba i-coronavirus wave wave iqhume eChonburi.
Kukho izizathu ezibini eziphambili zokufumba. Elokuqala linani labantu ngoku eliphantsi kohlobo oluthile lonyango okanye ukubekelwa bodwa: 2 kuyo yonke iChonburi ukusukela ngoLwesithathu. Iphondo likwaxele ngamatyala amatsha angama-18,942, kubandakanya ne-974 kwiSithili saseBanglamung, nalapho kubandakanya iPattaya.
Isizathu sesibini yimigangatho enenzondelelo urhulumente ayisebenzisileyo ukuhlela into njenge- "hazmat." Ngokusisiseko, nantoni na echukunyiswe ngumntu ovavanye ukuba une-COVID-19- nokuba banophawu okanye akunjalo- iyacelwa ukuba ipakishwe ngeplastikhi ebomvu kwaye iphathwe ngokukodwa ilahlwe. Oko kubandakanya izinto eziqhelekileyo njengebhotile yesosi eshushu okanye iphepha.
Iindleko zokulahla ezo ngxowa zibomvu zininzi. Umthumeli wenkunkuma kaPattaya, eMpuma Green World Co, ubiza i-1.5 baht ngekhilogram yenkunkuma eqhelekileyo. Inkunkuma eyosulelayo, nangona kunjalo, ixabisa i-24 baht ngekhilogram ukususa.
Oko kukhokelele "kubamkeli zindwendwe" -ihotele eziguqulweyo ezikhathalela abaguli abagulayo be-coronavirus-ukuguqula inkunkuma yabo kwidada lihlawule umrhumo. ICholchan Pattaya Beach Resort yabanjwa kwasekuqaleni kwale nyanga isongele iingxowa zayo ezibomvu ze-hazmat kwiingxowa ezimnyama ezihlala rhoqo.
UManote uthe uPattaya wayikhuphela ngaphandle ingqokelela yayo ye-hazmat endaweni yokusebenzisa iMpuma yeGreen yeHlabathi, kodwa loo nkampani ingachazwanga ngegama ayinakho ukuhambelana nokunyuka kwamaza eengxowa ezibomvu. Ke abasebenzi be-Eastern Green World baqeqeshiwe ngendlela yokuphatha inkunkuma eyingozi ukuze bakwazi ukuthutha inkunkuma ye-coronavirus, nayo.
UManote uthe kubalulekile ukuba zonke iibhegi zehazmat ziqokelelwe kwiveki enye, ke kufuneka ngaphezulu kwenkampani enye ukuyenza.
Isekela likaSodolophu likwagxininisile ukuba uluntu kufuneka luqaphele ngakumbi ekuhleleni inkunkuma ukuze nabani na ovalelweyo okanye abekwe yedwa emakhaya asebenzise iibhegi ezibomvu ze-hazmat ngokunjalo.